'La Casa de Papel 5' - အဆုံးသို့ရောက်သော Netflix ၏အောင်မြင်မှု Bezzia
Susana godoy | 07/09/2021 14:00 | လက်ဆောင်
အရစ်ကျအသစ်လေးပါ 'စက္ကူအိမ် ၅'မရ။ ရာသီသစ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲထားသည်။ ဇာတ်လမ်းတွဲသည်၎င်း၏နောက်ဆုံးရလဒ်အဖြစ်ရောက်ရှိနေချိန်တွင်၎င်းသည်မကြာခဏဖြစ်ပျက်ပုံရသည်။ သို့သော်တစ်ချိန်တည်းတွင် Netflix သည်ဤကဲ့သို့သောစီးရီးတစ်ခု၏အောင်မြင်မှုကြောင့်ရွေးချယ်မှုပလက်ဖောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါတို့သိတဲ့အတိုင်းဘဲ၊ သူကမမွေးခဲ့ပေမယ့် Antena 3. မှာပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ခဲ့တာဘဲ။ ဒါပေမယ့်စင်မြင့်ပေါ်ခုန်တက်တာကသန်းပေါင်းများစွာသောလူတွေကိုအဲဒါကိုပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့တာအမှန်ဘဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏နယ်နိမိတ်အတွင်းနှင့်အပြင်ဘက်၌ဖြစ်ပေါ်နေသောဖြစ်စဉ် အဲဒါတကယ်ပဲ ပထမဆုံးအခန်း ၅ ခန်းကိုသင်မြင်ပြီးပြီလား။
1 'La Casa de Papel 5' ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲထားသည်
2 La Casa de Papel ၏ရာသီသစ်
3 La Casa de Papel အတွက်အနာဂတ်ရှိမလား။
'La Casa de Papel 5' ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲထားသည်
ခရီးသည်ရှည်လျား။ များစွာသောပါဝင်မှုများနှင့်ရံဖန်ရံခါခါးသီးသောနှုတ်ဆက်မှုများနှင့်အတူအမြဲရှိသည်။ ဒါပေမယ့်တစ်ခုပဲရှိပုံပေါ်တဲ့စီးရီးတစ်ခုရဲ့ပဉ္စမရာသီကိုရောက်ခဲ့တယ်။ ငါတို့ပြောခဲ့သလိုဘဲအနီရောင်အကျီင်္နဲ့Dalíရဲ့မျက်နှာဖုံးမှာသူ့ရဲ့ဇာတ်ကောင်တွေကငါတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အပြင်မှာအကျော်ကြားဆုံးဇာတ်ကောင်တွေဖြစ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့်ဇာတ်လမ်းကောင်းတိုင်းဟာငါတို့သိတဲ့အတိုင်းအဆုံးသတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာအမှန်ပါပဲ။ ငါတို့ကိုနာကျင်စေပေမယ့်သူတို့ကစတိုင်လ်နဲ့အဆုံးသတ်ဖို့ထိုက်တန်တယ်ဆိုတာအမှန်ပဲ။ ဒါ့ကြောင့် စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် season3၏ပထမအပိုင်း ၅ ပိုင်းကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီးအခြား ၅ ခုသည်ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်တွင် Netflix သို့ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်မရ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီနှစ်မှာဒီဇာတ်လမ်းတွဲတွေရပ်စဲသွားလိမ့်မယ်။
La Casa de Papel ၏ရာသီသစ်
ငါတို့က spoilers တွေလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာငါတို့သိပြီးပြီ၊ ဒါကြောင့်စတုတ္ထရာသီရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းပြီးရင်ငါတို့ကပဉ္စမကိုအမြန်ဆုံးလိုအပ်တယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်။ ထိုအချိန်တွင်စတုတ္ထသည်အဆုံးဖြစ်မလားဟူသောသီအိုရီများစွာရှိခဲ့သည်မှာမှန်သည်။ ဒါပေမယ့် ဤမျှလောက်များစွာသောဘောင်များကိုလေထဲ၌ထားခဲ့ခြင်းသည်ပဉ္စမမြောက်လာမည့်သဲလွန်စကိုငါတို့အားပေးလိမ့်မည် ရောက်လာတယ်။
ဒါပေမယ့်အဲဒါကနှစ်ခုလောက်နဲ့ရောက်လာပြီးÁlex Pina ကပရိသတ်မျှော်လင့်မထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုပိုပြီးပံ့ပိုးပေးချင်ပုံရတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းကိုအုပ်စုနှစ်စုခွဲထားသော်လည်းမဖြေရှင်းနိုင်သောမြေကွက်များကိုပထမပိုင်း၌နီးပါးပြုလုပ်လိမ့်မည်မှာအမှန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အခန်း ၁၀ ခန်းကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းဖြန့်လိုက်သောအခါလူထုသည်မသိသောအရာများအားစတင်ဖြေရှင်းရမည့်နေရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးဖြစ်သည်။ အဲဒါကိုသတိပြုမိပါတယ် 'La Casa de Papel 5' ၏ဒုတိယအပိုင်းသည်ဇာတ်ကောင်တစ် ဦး စီ၏စိတ်ခံစားမှုလေယာဉ်ကိုပိုမိုနှစ်သက်စေသည် ထို့ကြောင့်၎င်းသည်နှုတ်ဆက်ပွဲနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
La Casa de Papel အတွက်အနာဂတ်ရှိမလား။
ဤအချိန်၌စီးရီးကိုအဆုံးမသတ်ချင်သောပရိတ်သတ်များသည်ရွေးချယ်မှုအသစ်များကိုစတင်စဉ်းစားသည်။ ဇာတ်ကောင်အချို့နေရာယူလိမ့်မည်၊ ၎င်းကို အခြေခံ၍ စီးရီးသစ်တစ်ခုရှိကောင်းရှိနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ငါတို့သိပြီးသောအခြားခေါင်းစဉ်များနှင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အတိုင်းစမှတ်သို့ပြန်သွားရန်ပြောဆိုကြသည်။ အခုလောလောဆယ်တော့၊ ငါတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းအပိုင်း ၁၀ ပိုင်းခွဲရမယ်.
ဤရာသီသည် Coronavirus ကြောင့်အကျပ်အတည်းကြောင့်ပိုရှုပ်ထွေးသောအသံသွင်းမှုတစ်ခုလည်းရှိသည်၊ အခန်းတစ်ခုချင်းစီသည်တစ်နာရီကြာမြင့်သည်၊ ၎င်းသည်၎င်းကိုအနည်းငယ်ပိုရှည်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ၎င်း၏အခြေအနေများတွင်ဒိန်းမတ်၊ စပိန်နှင့်ပေါ်တူဂီတို့ရှိသည်မရ။ ၎င်းသည်နည်းလမ်းတိုင်း၌စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးရာသီတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်တီးဝိုင်းကိုတင်ခြင်းနှင့် The Professor ကိုကန့်သတ်ခြင်းသို့ရောက်လုနီးပါးဖြစ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဇာတ်ကောင်အသစ်များလောင်းခြင်းနှင့်ပြီးစီးရန်အထိရည်ရွယ်သောပိတ်ပစ်ခြင်းအပြင် သူတို့သေချာပေါက်!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » လက်ဆောင် » 'La Casa de Papel 5': Netflix ၏အောင်မြင်မှု